I-Horoscope ngo-Septemba 2017 yeGemini Women
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 kubafazi beGemini baseTamara Globa
Emva kweSeptemba 5, i-Mercury iya kuphinda ibuyele ekuhambeni. Zonke iimeko eziqhubekayo kunye neeprojekthi ziya kufumana impembelelo entsha ekuphuhlisweni. Abasetyhini-iGemini baya kusebenza ngeli xesha, ukungena, baya kuba nexesha lokwenza okungaphezulu kwexesha eliqhelekileyo. Oku kunokubangela umona nokuhleba phakathi koogxa. Musa ukunyamekela oku, uphephe impendulo. Ukuba awuyi kunika impendulo, ingxoxo iya kumisa.
Ngobudlelwane nomntu omthandayo, bonisa umonde nokunyamezela. Ukungavumelani kunye nokuxabana okunokwenzeka, okuza kukukhupha. Ukulawula iimvakalelo, ukusebenzisa amaqhinga amabhinqa, kunye neengxabano ezinzulu ziya kugwenywa. Abasetyhini bodwa bodwa bacebiswa ukuba baphumule kwixesha le-velvet. Ngexesha lohambo ungahlangana nomyeni wakho wesikhathi esizayo.
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 kubafazi be-Gemini base-Angela Pearl
Ukuqala kwekwindla yinto elungileyo kubafazi beGemini. Abameli abalungileyo balo mqondiso baya kuba nako ukuzivakalisa ngokwakhiwa kwemvelo, baya kutshintsha ngokugqithisileyo kwaye ngaphandle komgudu benza isicwangciso somsebenzi. Ukusebenzisa amathuba kunye namathuba aza kuwa ngoSeptemba, uya kubeka isiseko sempumelelo ezayo. Kwisiqingatha sokuqala senyanga, ubomi bobuqu buza kuqala. Abaninzi abafazi beGemini baya kuthatha isigqibo sokuvuselela ubudlelwane obudala kunye noqhagamshelwano. Kule nto, kungcono ukuphulaphula intuition yakho. Kodwa musa ukwenza nayiphi na isithembiso, kwisiqingatha sesibini sangoSeptemba isimo sakho sengqondo singatshintsha ngokuphawulekayo. Abameli beentsapho zale mqondiso baya kuxakeka ngeengxaki zemihla ngemihla.
IHoroscope yeCapricorn-Abafazi ngo-Matshi 2017
IHoroscope ngoJanuwari 2018 - owesifazane uDeva - waseTamara Globa no-Angela Pearl
Ukufundwa kweenkwenkwezi: ukuchazwa kweveki kaJanuwari 29 -Februwari 4 ngemiqondiso ye-zodiac
Izimpawu ze-Zodiac, ezilindele ukungaphumeleli ngo-2017 we-Firecracker
Ikhekhe le karoti
Ungayilandela njani ngokufanelekileyo ukunyameka?
Iklabishi inokudla inyama enobuncwane
Indlela yokuzonwabisa indoda
Izinketho zokumema umtshato
Ukupaka ngesipinashi kunye noshizi
Kubantwana abancinciweyo kuma-mahle amantombazana
Ungayiqonda njani ukuba umthandi akanakuze ahlukane?